Lelee nhazi Google Earth na Excel - ma gbanwee ha UTM - Geofumadas
Nọvemba, 2017 downloads, Google Earth / Maps
Enwere m data na Google Earth, achọrọ m iji anya nke uche nhazi na Excel. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ala nwere ogidi asaa na ụlọ nwere akụkụ anọ.
Zọpụta data Google Earth.
Iji budata data a, nri pịa «My Ebe», na họrọ «Chekwa ebe dị ka ...»
Maka ịbụ faịlụ nwere akara, isi na njirimara ndị m gbanwere na akara ngosi, faịlụ a agaghị azọpụta dị ka kml dị mfe ma dị ka Kmz.
Kedu faịlụ KMZ?
A kmz bụ faịlụ faịlụ kml abịakọrọ. Yabụ ụzọ kachasị mfe iji kpughee ya bụ dịka anyị ga - eji faịlụ .zip ma ọ bụ .rar.
Dị ka e gosiri na eserese na-esonụ, anyị nwere ike ọ gaghị ahụ ndọtị faịlụ ahụ. Iji mee nke a, anyị ga-eme ihe ndị a:
1. Nhọrọ iji hụ mmepụta nke faịlụ ahụ na-arụ ọrụ, site na "View" taabụ nke ihe nchọgharị faịlụ.
2. Gbanwee ndọtị site na .kmz ka .zip. Iji mee nke a, a na-eme pịa dị nro na faịlụ ahụ, na data mgbe emechara ihe gbanwere. Anyị na-anabata ozi ga-apụta, nke na-agwa anyị na anyị na-agbanwe ndọtị faịlụ yana na ọ nwere ike ime ka ọ ghara ịdị.
3. Emeghewo faịlụ ahụ. Bọtịnụ aka nri aka nri, ma họrọ "Wepụ n'ime ...". N'okwu anyị, a na-akpọ faịlụ ahụ «Geofumadas Classroom Terrain».
Dịka anyị nwere ike ịhụ, e mepụtara nchekwa, ma n'ime gị nwere ike ịhụ faịlụ kml a na-akpọ "doc.kml" na nchekwa a na-akpọ "faịlụ" nke nwere data metụtara, na ihe oyiyi zuru oke.
Mepee KML si Excel
Kedu faịlụ Kml?
Kml bụ usoro nke Google Earth gosipụtara, nke dị n'ihu ụlọ ọrụ Keyhole, ya mere aha ya (Keyhole Markup Language), ya mere, ọ bụ faịlụ nwere usoro XML (eXtensible Markup Language). Yabụ, ịbụ faịlụ XML ọ ga-enwerịrị ike ịlele ya na Excel:
1 Anyị gbanwere mgbatị ya site na .kml ka .xml.
2. Anyị na-emeghe faịlụ site na Excel. N'okwu m, na m na-eji Excel 2015, ana m enweta ozi ma ọ bụrụ na m chọrọ ịhụ ya dị ka tebụl XML, dịka akwụkwọ a na-agụ naanị ma ọ bụ na m chọrọ iji ogwe isi XML. Ahọrọ m nhọrọ mbụ.
3 Anyị na-enyocha ndepụta nke nhazi mpaghara.
4 Anyị na-edeghachi ha na faịlụ ọhụrụ.
Na voila, ugbu a anyị nwere faịlụ nhazi Google Earth, na tebụl Excel. Malite na ahịrị 29, na kọlụm X pụtara aha nke ogwe, na latitude / longitude nrụtụ na kọlụm AH. Ezoro m ụfọdụ ogidi, ka ị wee hụ na n'ahịrị 40 na 41 ị nwere ike ịhụ polygons abụọ m dọtara, yana usoro nhazi ha.
Ya mere, site n'iji ederede X na ngalaba nke AH, ị nwere ihe na nhazi nke ihe Google Earth.
Anyị nwere olileanya na n'elu ahụ enyerela gị aka ịghọta otú ị ga-esi chekwaa data Google Earth na faịlụ zipz, yana ịghọta otú ị ga-esi gafere faịlụ kmz na kml, n'ikpeazụ ka esi lelee njikwa Google Earth site na iji Excel.
Nwere mmasị na ihe ọzọ?
Weghachite data site na Google Earth na UTM.
Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị ntọala ala ndị ahụ nke ị nwere n'ụdị nkwụsịtụ nke ịdị ala na ogologo oge iji nhazi usoro ntụziaka UTM, ị nwere ike iji template dịnụ maka nke ahụ.
Kedu ihe nhazi UTM?
UTM (Universal Traverso Mercator) bụ a usoro na-ekewa ụwa na ebe 60 6 degrees ọ bụla gbanwee mathematically yie ihe ellipsoid atumatu na a okporo; dị ka akọwawara n'isiokwu a. ma na vidiyo a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'ebe ahụ ka i youomi nhazi ndị egosiri n'elu. N'ihi ya, ị ga-enwe nhazi X, Y yana mpaghara UTM akara na kọlụm akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke ihe atụ ahụ pụtara na Mpaghara 16.
Ziga data site na Google Earth na AutoCAD.
Iji nwee ike iziga data na AutoCAD, naanị ị ga-eme ka iwu nke ọtụtụ isi rụọ ọrụ. Nke a dị na taabụ "See" dị ka egosiri na ịse aka n'aka nri.
Ozugbo i mejupụtara iwu ihe otutu, wepụta na kpochapu data site na tempel Excel, site na akuku ikpeazụ, gaa na akara nke AutoCAD.
Na nke a, etinyela nhazi gị. Iji lee ha, ịnwere ike Mbugharị / Ihe niile.
Ị nwere ike nweta template ahụ na Paypal ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ, ị na-enweta email na njikọ njikọta. Thezụta ndebiri na-enye gị nkwado email, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ndebiri ahụ.
Previous Post«Previous Detuo nhazi na AutoCAD site na faịlụ Excel CSV
Next Post Ahụmahụ m na-eji Google Earth maka CadastreNext »
5 Azịza ya "Lee nhazi Google Earth na Excel - ma gbanwee ha UTM"
Ọ bụ ihe ihere, karịa ma ọ bụ Google Earth anaghị ekwe ka ihe e ji kee polygons na precisão aceitáveis ​​àgwà. Dezie fazê-lo em out GIS usoro ma zipụ ya na Google Earth.
Glia Josina kwuru, sị:
Ee geofumadas !!
Kedu ka m ga - esi tinye otu polygon abụghị google n'ụwa?
Ọ dị mkpa ibute isi ihe na itinye ha ma ọ bụ polygon n'ụzọ nkịtị iji mee ka ebe ahụ dị. Ma ihe na-eme mgbe quando faço ma ọ bụ Zoom na-enye mpaghara ọrụ, ma ọ bụ na-atụgharị ma ọ bụ polygon, na-akwapụ anya nke njehie n'etiti ma ọ bụ polygon ọ bụla.
Ou seja, Achọrọ m ịgbakwunye polygon abụghị google ụwa (Ọ nwere ike ịbụ site na excel, melhor)
Enwere m olileanya na m ga-edozi na muito obrigada!
hiep nguyenba kwuru, sị:
Ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ faịlụ, email gị nguyenbahiep775@gmail.com. Gbanyụọ ya.
Na njikọ a bụ akwụkwọ dị iche iche dị iche iche nke ị nwere ike inweta iji nyefee kọntaktị transcode
fabio kwuru, sị:
Hi geofumadas, Atụmatụ dị mma maka iji google ụwa, ọ na-enyere m aka n'ọtụtụ ọrụ m.
nkwado, ebe m nwere ike ibudata MGBE GỊ NA-ECHICHE Ndepụta nke GEOGRAPHICAL COORDINATES (X, Y, Z) TO UTM, Achọrọ m ya.
Ana m eche maka okwu gị